को नचाहिएका - भाग 20 | Apg29
मेरो कक्षा म Torpa स्कूलमा गए जब म थियो कि मेरो पुरानो स्कूलका साथीहरू कक्षा टुक्रा थियो। म माथि मा सचमुच oblong भवन को एक कुनामा समाप्त गर्दा तिनीहरूले उच्च विद्यालय भवन को मध्य मा समाप्त भएको थियो। पुरानो वर्ग प्राप्त गर्न, म लामो गलियारे मा आधा बाटो जाने र त्यसपछि दायाँ बारी थियो। यसलाई म त कहिलेकाहीं गरे कि भयो।
एक अवसरमा म यसलाई म स्कूल शूटिंग संग लडाई, धेरै वर्षअघि मा भयो कि मान्छे थियो, मसीही भेटे। म हामी बारे कुरा के तर यो amicably थियो सम्झना छैन। Mains हामी त्यहाँ बेन्चहरूले, विद्यालय लकर मा recess मा अन्य विद्यार्थीहरूको जमातमा कुरा र जैकेट अचानक केटी मलाई आए र भन्छन् हुनेछ:
"तपाईं आफ्नो चिल्लो लागेको बाल धुन सक्छन् तपाईं घर मा कुनै पनि शवर छ?"
म स्तब्ध भयो र भन्न के थाहा थिएन, र अझै शान्त थियो। क्रिश्चियन उहाँले apologetically बन्द हाँसो गर्न प्रयास गर्दा उहाँले भन्नुहुन्छ के थाहा थिएन। केटी सहमत भएकोले। म त्यो थियो जसले थाहा थिएन, तर यो मेरो लागि धेरै पीडादायी थियो।
किनभने म मेरो बोसो र चिल्लो लागेको बाल द्वारा सास्ती थियो यो मलाई चोट। यसको लागि उपाय, म थप शवर पर्छ वा कम्तिमा थप अक्सर धुन थियो, तर म मेरो पालुङ्गो आमा को लागि त्यहाँ थिएन। बित्तिकै नुहाउनु वा मेरो बाल धुन म यसलाई प्राप्त भएन त म चाहन्थे रूपमा। म एक शवर लिन सक्छ किनभने म घर मा भोगे र म मेरो चिल्लो लागेको कपाल वरिपरि हिंड्न थियो किनभने म स्कूलमा सास्ती थियो। म समस्याग्रस्त थियो र यसको लागि खराब महसुस र मेरो पहिले नै कम आत्म-सम्मान पनि थप अनिश्चित र निराश भए।
सायद यो उनको गरिब पृष्ठभूमि मेरो पालुङ्गो आमा opsykologiska व्यवहार थियो। त्यो सबै मा सुरक्षित गर्न सिकेका थिए। यो गरिबी सोचाइ त्यो राम्रो बन्द थियो हुँदा पनि आर्थिक, धेरै वर्ष को लागि उनको साथ जाने थियो। त्यो आफूलाई केहि छैन अनुमति, तर पहना र पुरानो लुगा बारे भयो। त्यो नयाँ र ताजा कुरा किन्न भन्दा बढी थियो, तर त्यो गरे कहिल्यै।
या त्यो मेरो पालुङ्गो बुबा को डर थियो कि उनको व्यवहार थियो। मलाई थाहा छैन, तर त्यो धेरै वर्ष को लागि एकदम उहाँलाई द्वारा मातहत गरिएको थियो। त्यो उहाँले सुन्न गर्नुभयो जब कहिलेकाहीं पतिको बारेमा unflattering कुराहरू हामीलाई छोराछोरीलाई भन्नुहुन्छ।
म यसलाई विचार गर्दा, उहाँले उनको बारेमा कहिल्यै यस्तो कुरा, तर अर्कोतर्फ, उहाँले सामान्य कहिल्यै केही भने। एक शब्द भन्दै बिना उहाँले दूर आफ्नो कार संग कहीं जान सक्छ। उहाँले थियो वा गरे जहाँ मेरो पालुङ्गो आमा थाह कहिल्यै। यदि त्यो त्यो बच्चाहरु हामीलाई गुनासो, तर उहाँलाई यो सिधै भने कहिल्यै। म तिनीहरूलाई बहस कहिल्यै देखे, तर यो व्यवहार एक प्रमुख झुंझलाहट थियो। तिनीहरूलाई बीच संचार पूर्ण मरेको थियो, र यो म संग भयो कि यो थियो। प्रत्येक अन्य कुरा कहिल्यै।
मेरो पालुङ्गो बुबा उहाँले चौध को उमेर देखि गरेको थियो जो एक पाइप, धूम्रपान, तर उहाँले Booze संग कुनै समस्या थियो। यो वोदका र भान्साको सामान राख्ने ठाउ मा एक शेल्फ अन्य रक्सी बोतल थियो, तर उहाँले तिनीहरूलाई बाहिर आफूलाई पिए, तर केवल यसलाई मा एक पटक उहाँले सानो schnapps चढाएको घरमा अतिथि थिए कहिल्यै।
तर फिर्ता अब मेरो चिल्लो लागेको बाल गर्न। म यो गरेर तर्साउने थियो तर यो कसरी समाधान गर्न थाहा थिएन। त्यतिबेला केटाहरु म थियो जो एक सानो अब कपाल। म मेरो कान भन्दा केश चाहन्थे तिनीहरूले देखिने थियो भनेर छैन। म ठूलो भएको र तिनीहरूले स्पष्ट रातो थिए त मेरो आफ्नो औंलाहरु संग पछि देखि तिनीहरूलाई थप्पड थिए "comrades" को रूपमा कान फैलएको लागि तंग गरिएको भन्दा बढी पटक थियो। तर मेरो कपाल यसलाई राम्रो थिएन त यति चिल्लो लागेको र बोसो थियो, तर तल र कान वरिपरि LANK र कुरूप हङ किनभने। ओह, के म मेरो LANK बाल द्वारा सास्ती थियो!
यो गिरावट किनारा तिर चिसो हुँदा स्कूलमा एक जर्मन भाइ बहिनी थाले। एक केटा र केटी। तिनीहरूले मेरो लागि एक स्टप मा बस मा कदम। म तिनीहरूलाई याद तिनीहरूले भन्दा हामीलाई Swedes एक सानो विभिन्न लुगा थियो। केटी लामो, ठीक braids थियो, र केटा मौसम चिसो प्राप्त भएको थियो तापनि छोटकरीमा थियो। तर पनि तिनीहरूले स्कूल बस मा LANK चिल्लो लागेको कपाल केटा सँगै बस्न चाहन्थे। म अर्को मलाई गर्न सिट खाली थियो तर तिनीहरूले बस पछाडि बसे कि सम्झना। म त तिनीहरूले mih संग टोली आउनु हुनेछ र आफूलाई तंग गर्न यो किनभने म teased थियो लाग्यो।
म छैटौं ग्रेड सकिएपछि, म घटिया मूल्यांकन भएको थियो। म त cowed र तंग थियो Torpa स्कूलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न व्यवस्थित कहिल्यै। मेरो विश्वास मात्र जूता तल आयोजित थिएन, तर त्यहाँ थिएन। म मेरो हुल्याहाहरू टाढा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने किनभने, म कहाँ तिनीहरूले अलि बढी आरामपूर्वक गति पढ्न उच्च विद्यालयमा एक फरक वर्ग राख्नु भएको थियो। त्यसपछि यो मेरो लागि धेरै राम्रो भयो। म कक्षा मा धेरै राम्रो तरिकाले मा पायो र यो मलाई तंग गर्ने मेरो स्कूलका साथीहरू को कुनै पनि थियो। सबै भने पनि तिनीहरूले केही समाजमूलक छैन वा तिनीहरूलाई थाहा पायो, मित्र थिए।
हामी पनि त सामान्य थियो जो समयमा कक्षा केही आप्रवासी थियो। हामीलाई बाँकी, एक टर्की ले र एक ग्रीस देखि भन्दा दुई वर्ष पुरानो थियो जो एक लेबनान को। तिनीहरूलाई कुनै पनि समस्या कहिल्यै थियो र तिनीहरूले teased न त जो कोहीले।
म पछि 9th ग्रेड मा उच्च विद्यालय मा अन्त हुनेछ, म कक्षा मा सबै भन्दा राम्रो थियो र औसत मा 4.7 थियो। त्यतिबेला तिनीहरूले स्कूलमा एक पाँच-बिन्दु मात्रा थियो। पाँचौं स्थानमा सबै भन्दा राम्रो थियो, जबकि एक, खराब थियो।
हुनत त्यहाँ मलाई तंग त त्यहाँ अन्य कक्षाहरू यसलाई गरे जो देखि विद्यार्थी थिए मेरो वर्ग मा एउटा थियो। Stefan, लामो rickety गोरो केटा, मलाई हावी गर्न कार्य लिएको थियो। त्यसैले चारैतिर विद्यार्थी सुन्न सक्छ उसले मलाई आलोचना कराउँछन् सकेन। यो अपमानजनक र लाजमर्दो थियो। उहाँले यसो किन मलाई थाहा छैन। यो सिर्फ यति थियो। यो मेरो धेरै थियो र म यो मा आफैलाई प्रस्तुत। म यसलाई मा हुर्केका त म केहि थाहा थिएन पहिलो क्षण देखि भएको थियो।
म समाप्त उच्च विद्यालय थियो पछि, त्यो जारी राख्न र उहाँले मलाई कहीं देखे मलाई बित्तिकै हावी गर्न सक्षम थियो। उहाँले त गऱ्यौ किन म बुझे कहिल्यै।
म मेरो जीवन निर्देशन को एक गरिब अर्थमा थियो मा छ। खेलकुद दिन स्कूल द्वारा आयोजित पछि एक बिन्दुमा त्यसैले म फिर्ता बस जाने जहाँ स्कूल बाटो फेला पार्न थिएन।
म बाटोमा अलमलिएको जब म हिड्ने थियो मेरो स्कूलको केही विद्यार्थी भेटे। म तिनीहरूलाई निर्देशन लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरे। म कसरी हराएका र अनिश्चित देख्यो तिनीहरूले याद हुनुपर्छ। लगभग तुरुन्त तिनीहरूले जिस्क्याउ र मलाई हावी म बाटो हुन सक्छ किनभने थाले। तिनीहरूले मलाई "खोच्चाउनु" तिनीहरूले पनि स्कूल भविष्यमा मलाई कल गर्न आए जो भनिन्छ।
तर तिनीहरूले म स्कूल प्राप्त गर्न जाने भनेर सही rktingen बाहिर जसरी औंल्याउनुभयो। किनभने म पाउनुभयो तिनीहरूले मलाई टिप्न थियो किन म बुझ्न सकिएन। म शायद तिनीहरूलाई थाह थियो।
भाग 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20